जिद्दी छोराछोरीलाई कसरी अनुशासित बनाउने ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विविध > जिद्दी छोराछोरीलाई कसरी अनुशासित बनाउने ?
October 10, 2020 October 10, 2020 GRISHI80
अहिलेकाे वैज्ञानिक युगमा अभिभावकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, बालबालिकालाई संस्कारयुक्त बनाउनु, उनीहरुलाई अनुशासित बनाउनु, उनीहरुलाई सम्हाल्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकाे खाना खुवाउने, टेलिभिजन र मोबाइल चलाउनबाट बन्द गराउनुलगायत बनेको छ ।
अहिले कोरोना महामारीको बेला रहेको छ । त्यसैले बाहिर तिर निस्कनु स्वास्थयका हिसावमा जोखिम हुन्छ ।
बाहिर जान खोज्ने र घुम्न हिँड्नका लागि झगडा गर्ने बालबालिका रहेका हुन्छन् । तर त्यस्ता बानीलाई नियन्त्रणमा लिनु ठूलो चुनौती अभिभावकमा रहेको हुन्छ ।
बालबालिकालाई फकाउन र उनीहरुलाई सम्हाल्नु अभिभावकलाई ठूलो चुनौती रहेको हुन्छ ।
बालबालिकाको हेरचाहमा आमाबुवाको गल्ती दिनप्रतिदिन बढ्दै जान्छ र बालबालिका नराम्रोसँग नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छन् ।
जिद्दी बालबालिकालाई सम्हाल्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो कि तपाईंले उनीहरुको नराम्रो काममा कुनै प्रतिक्रिया नदिने र राम्रो काम गर्दा सधै तारिफ गर्ने ।
मनोवैज्ञानिक तथा प्यारेन्टिंग एक्सपर्टस्का अनुसार उनीहरुलाई अनुशासित बनाउन यस्तो काम गर्न आवश्यक छ ।
जब तपाई कुनै पनि कुरालाई लिएर बालबालिकासँग जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भने स्वभावत तपाई बच्चा बिद्रोही हुँदै जान्छन् । तत्कालका लागि जबरजस्ती गरेर त काम बन्नला तर पछि गएर यो खतरनाक हुँदै जान्छ ।
तपाईं आफ्ना छोराछोरीले आफूलाई सम्मान गरेनन् भनेको मानेनन्, जिद्दी भए भनेर दुख मनाउ गरिरहनु भएको छ भने आफूले उनीहरुमाथि गर्ने व्यवहार बारे पनि सोच्नुहोस् ।
बालबालिकालाई आफूले कस्तो व्यवहार, सम्मान गरेको छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भने उनीहरुको व्यवहार किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । भन्नुको मतलव तपाईले बालबालिकालाई सम्मान, माया दर्शाउन कन्जुस्याई नगर्नुहोस् ।
बालबालिकाको आफ्नो दिमाग हुन्छ र उनीहरु सधै त्यस्तो काम गर्न मन पराउँछन् जो उनीहरुलाई भनिएको हुँदैन । यदी तपाईले आफ्नो ५ वर्षको बच्चालाई जबरजस्ती ८ बजेभन्दा पहिला सुत्न जा भन्ने आदेश दिनुहुन्छ भने उसले त्यसलाई अस्विकार गर्न सकछ ।
तर तपाईंले उसलाई आदेश दिनुको सट्टा उसलाई सोध्नुस् कि सुत्नुभन्दा पहिला कुन कथा सुन्न मन पराउँछ । बालबालिकालाई आदेश होइन उसलाई सुझाव र विकल्प दिनुहोस् । यदी तपाईंको बच्चाले म सुत्न जान्न भन्ने जवाफ दियो भने तपाईं नरिसाउनुहोस् ।
उसलाई सुत्न पठाउनका लागि विभिन्न विकल्पहरु दिनुहोस् या उ सँगै ओछ्यानमा सुतेर केही कथा, रमाइलो कुरा सुनाउनुहोस् । यसो गर्नाले बालबालिकाले जिद्दी छोड्दै जानेछन् ।
यदी तपाईं हरेक कुरामा आफ्ना छोरा छोरीलाई गाली गर्नु हुन्छ भने तपाईको बच्चा तपाईको चिच्याहठलाई बोलिको लडाईको रुपमा लिन सकछन् ।
उसलाई हरेक कुरामा चिच्याएर आफ्नो कुरा जबरजस्ती राख्ने बानी पर्न जान्छ । त्यसैले आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो र अनुसासित बनाउनका लागि मिठोसँग बोल्ने गर्नुस् ता कि तपाईंबाट बालबालिकाले सिकुन् ।
सडक दुर्घटनामा दुई नेपाली घाइते, तीन वर्षिया बालकको घटना स्थलमै मृत्यु ।
August 14, 2020 August 14, 2020 News Desk
इडीभीको नतिजा आज यसरी हेर्न सकिन्छ !
मोटी केटि पाउने पुरुष भाग्यमानी हुन्छ !